Guddoonka Aqalka sare ee Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya ayaa qaraar ka soo saaray weerarkii lagu qaaday guriga Senator Cabdi Xasan Cawaale Qeybdiid uu ka degen yahay magaalada Muqdisho. Qaraarka ayaa lagu amray in maxkamad la soo taago ciidamadii ka qeyb qaatay weerarkii ka dhacay hoyga Senator Cabdi Qeybdiid, waxaana sidoo kale laga dalbaday wasaaradda gaashaandhiga...
Wasaaradda Owqaafta iyo Arrimaha Diinta Xukuumadda Federaalka ah ee Soomaaliya, ayaa soo saartay War saxaafadeed ku wajahan maamullada masaajidda iyo Xarumaha diinta lagu barto ee ku yaalla magaaladda Muqdisho iyo dhammaan gobolada dalka Soomaaliya. Qoraalka War saxaafadeedka ay soo saartay Wasaaradda Owqaafta iyo arrimaha diinta XFS ayaa lagu amray dhammaan masaajidyada,dugsiyada...
Rag loo haysto qaraxii Zoobe oo maanta la horkeenay Maxkamada Ciidamada Qalabka Sida (Sawiro)
Maxkamada Ciidamada Qalabka Sida ee Soomaaliya ayaa maanta waxa ay dhageystay dacwad loo heysto rag lagu eedeynayo in ay ka dambeeyeen qaraxii lagu hoobtay ee 14,kii bishii Oktoobar Sanadkii 2017 ka dhacay Isgoyska Zoobe ee Magaalada Muqdisho. Raggaan Maanta dacwada loo heysto la dhageystay ayaa gaaraya ilaa 5 ruux mid kamid ah ayaa kamaqnaa maxkamada. Ragga la soo taagay...
Ra’iisal wasaare ku-xigeenka dalka oo daah furay qalab casri ah oo qashinka iyo carrada looga saarayo Dekadda Muqdisho+Sawirro
Ra’iisal wasaare ku-xigeenka Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mudane Mahdi Maxamed Guuleed ayaa maanta daah furay qalab casri ah oo saaraya Maraakiibtii ku bur buray Biyaha Badda iyo qashinka ku dhex jira. Qalabkan cusub oo ay keentay shirkadda Albeyrak ee ka howlgasha Dekadda Muqdisho ayaa waxaa goob joog ka ahaa goobta lagu daah furayay Wasiirka Dekadaha iyo Gaadiidka...
Wafdi uu Hoggaaminayo Wasiir Juxa oo gaaray Magaalada Doolow
Wasiirka Arrimaha Gudaha, Federaalka iyo Dib u heshiisiinta ee Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mudane Cabdi Faarax Juxa oo ay wehlinayaan Xildhibaano iyo Taliyaha laanta socdaalka Maxamed Aadan Jimcaale Koofi ayaa maanta gaaray Magaalada Doolow oo ku taala xadka Soomaaliya iyo Itoobiya, waxaana si weyn u soo dhaweeyay masuuliyiin ka tirsan Maamulka degmada iyo shacabka. Wafdiga...
Dood Cilmiyeed ku saabsan Tayeynta Waxbarashada dalka oo Muqdisho lagu qabtay
Dood Cilmiyeedkaan ayaa ku saabsanaaa sidii dib loogu soo celin lahaa waxbarshadii lacag la’aanta ee horay uu lahaan jiray dalka iyo manaajih tayo leh iyo sidii loo ogaan lahaa tirade guud ee ardayda waxbarata iyo kuwa aana heysan fursadaha waxbarsho, kuuwaasi oo uu xaq u leeyahay muwaadin walbo in uu helo fursad waxbarsho. Dood Cilmiyeedkaan ayaa waxaa soo qaban qaabiyay...
Akhriso; Warsaxaafadeed uu ka soo saaray Guddiga Difaaca Golaha Shacabka Xaalada Degmada Beled Xaawo
Guddigga difaaca Golaha Shacabka ayaa kulan ay yeesheen waxa ay ku cambaareyeen dhul boob la sheegay inay ka wadaan ciidamada Kenya degmada Beled Xaawo. Warsaxaafadeed uu ka soo saaray Guddiga Difaaca Golaha Shacabka kulankiisa ayuu ugu baaqay dowlada federalka,maamul goboleedka iyo shacabka Soomaaliyeed inay meel uga soo wada jeesteen ciddii ku soo xadgudubta qaranimada...
Wasiir Yariisow oo shaaciyay Qorshaha Xukuumadda ee sanadka 2018-ka
Wasiirka Warfaafinta Xukuumadda Soomaaliya Eng, C/raxmaan Cumar Cusmaan Yariisow oo la hadlay SONNA ayaa sheegay in Xukuumadda Soomaaliya sanadka cusub ee 2018-ka qorsheyneyso iney ku talaabsato Horumaro la taaban karo oo shacabka Soomaaliyeed ay u riyaaqi doonaan. Wuxuu sheegay Wasiir Yariisow in sanadka 2018-ka u qorsheysan tahay Dowladda Soomaaliya hirgelinta nidaamka...
Gudoomiyaha Gobolka Banaadir oo xalay booqday Ciidamada ku sugan Duleedka Muqdisho.
Guddoomiyaha Gobalka Banaadir ahna Duqa Muqdisho Thaabit Cabdi Maxamed ayaa xalay saqdii dhexe booqday xarumaha Ciidamada Dowladda ee degaanka Siinka Dheer oo ku yaalla duleedka magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya. Thaabit ayaa xalay Ciidamada uu booqday siiyay casho, wuxuuna saraakiisha Ciidamada ka wareystey xaaladaha guud ee ay ku shaqeeyaan iyo waxyaabaha gaarka...
Kim Jong Un:Awood ayaan u leenahay in Mareykanka aan Niyukleer ku garaacno
Hogaamiyaha Kuuriyada waqooyi ayaa sheegay in dhamaan mareykanka uu ku jiro imika xeendaabka hubkiisa Niyukleerka . Waxa uu intaa ku daray in uu mar waliba keebka laga rido Niyukleerka uu miiskiisa saaran yahay. Hogaamiyaha kuuriyada waqooyi Kim Jong Un ayaa sheegay in hadalkiisa uu xaqiiqo yahay oo aysan hanjabaad ahayn. Mr Un ayaa sheegay in iyada oo laga duulayo xaqiiqadaasi...